ကြုံခဲ့ရ နဗနဘ၀: 37.3 ဆိုရှယ်လစ်က ထုဆစ်ခဲ့တဲ့ ဘ၀များ
How about nowadays bro?
There is worse day by day in our country.
Because of that Dogs.Who can kill them?
ဦးနှောက်ကိုမေ့ဆေ့ပေး....xxx မှိုင်းအောက်မှာ မူးဝေအော့အန်ရင်.. ဟော. သဘောကျတဲ့စာပိုဒ်လေးကို ကိုးကားပြောမလို့ကြံနေတုံး..သူများဦးသွားပြီ။
စနစ်က ထုဆစ်တဲ့ဘ၀များ ဆိုတာတော့သွေးထွက်အောင်ကိုမှန်လှတယ်။ လူ့သဘာဝအရ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်မကြည့်ပဲ သူများကိုကြည့်ပြီး ဥပမာပြအုံးမယ် (ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည့်ပြောရင် ပဲရေကြဲနဲ့ ငပိစိမ်းစားတုံး နံ့နဲနဲထွက်လာလို့ :P) ။ ကိုရီးယားလူမျိုးချင်း တူပါလျက်
ခေါင်းဆောင်ကြီး ကင် ဦးဆောင်မှုအောက်မှာ ညီညီညာညာ ပိပိပြားပြား သေသေ၀ပ်ဝပ်လေး နေရတဲ့ မြောက်ပိုင်းက လူတွေကတော့ ဘ၀တွေလဲ မွဲ၊မျက်နှာရော စိတ်ဓါတ်တွေပါမွဲသွားကြပြီး။ ပိုမိုလွတ်လပ်ပြီး လူသားအဖြစ်ရပိုင်ခွင့် တွေထွန်းကား၊ အများညီမှဆုံးဖြတ်ချက် ချနိုင်တဲ့တောင်ပိုင်းသားတွေမှာတော့..ကမ္ဘာမှာမော်ကြွား၊ သွားလေရာ အောက်မကြို့ရပဲ။ မျက်နှာပွင့်နေပုံ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါလေ။ လူစွမ်းလူစမှာဖြင့် တောင်နဲ့မြောက် ဘာများကွာမှာလဲ။
" စိတ်ဓာတ်တွေဟာ စံနစ်က ပုံသွင်းထားတဲ့ အတိုင်း အသားကို သေလို့..။ ဘဝတွေကလည်း စံနစ်က ပုံဖော်ထားတဲ့ အတိုင်း ပိန်လိမ် ခြောက်ကပ် လို့..။ "
ဘယ်တော့များမှ အသားပြန်တက်ပြီး၊ လူလူတူတူ ဖြစ်လာကြမှာပါလိမ့်လို့ နေ့နေ့ညည အတွေးပွားနေမိပါတယ်..။ ကျနော်တို့တတွေ မသေခင် ဒီတသက် 'နလံထူစဘဝတွေ' အမြန်ဆုံး ပြန်လည်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ
လက်ဝဲ အယူအဆဟာ တော်လှန်တဲ့ အချိန်မှာသာ ကောင်းတယ်။ အာဏာရရင်တော့ လက်ယာကို ပေးအုပ်ချုပ်ခိုင်း သင့်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။
စိတ်ဓါတ်ကို မေ့ဆေးပေး ဦးနှောက်ကို ထုံဆေးထိုးထားရင်း
မအယ်တို့ လည်း ဒီလိုပဲ ခံခဲ့ရတာပါပဲ။